10 Best Places N'ihi Snorkeling Na Europe | Save A Train
Home > Njem Iceland > 10 Best Places N'ihi Snorkeling Na Europe
Train Travel Austria, Train Travel France, Inzọ Njem Germany, Inzọ Njem Italytali, Inzọ Njem Portugal, Ingbọ ologo Spain, Train Travel UK, Travel Europe, Njem Iceland
Osimiri Orchins, okpukpu mmiri, agba agba agba agba, na ụfọdụ n’ime mmiri kacha sachaa n’ụwa, nsị na ndị a 10 ebe bụ uche na-akụ mmụọ. ndị a 10 ebe kacha mma maka snorkeling na Europe, nwee ọhụụ dị ịtụnanya na 20 m. mmiri n'okpuru osimiri, ma bụrụkwa ebe obibi ụfọdụ n’ime ndụ mmiri kacha atọ ụtọ n’elu ụwa.
1. Ebe kachasị mma maka snorkeling na UK: Devon
Site n'àgwàetiti ahụ jupụtara n'oké nkume ruo Bridge Bridge, na ugwu nke Tor Bay, ebe ị ga-ahụ otu n'ime ebe kachasị mma nsị na UK. Anemones ọla na-acha odo odo na-acha odo odo, mọsel, na iche tompot blennies azu, ị nwere ike iji otu ụbọchị zuru ezu sụọ ụra na London Bridge.
Ọtụtụ ndị ọbịa na UK na Devon nwere ike ghara ịma na ha na-aga otu n'ime ebe kachasị mma nsị na Europe. Otú ọ dị, Devon bụ ezigbo ụzọ nsị na mmiri na UK. Na mgbakwunye na London Bridge, Lundy Island bụ ọla bara ụba ọzọ, ya na akàrà, ọnwa jelii, na dolphin iji hụ.
Amsterdam na London na A Train
2. Ebe kachasị mma maka snorkeling na Portugal: Nnukwu Berlenga
A ma ama Portugal maka oke osimiri ya ndị mara mma, Agwaetiti Berlenga Grande sokwa. dị nnọọ 10 kilomita site Peniche, otu n'ime 10 kasị ịtụnanya sọọfụ ebe na Europe, Berlenga bu ezigbo agwaetiti. Ọ mejupụtara 3 obere agwaetiti nke ọgba, mmiri gbara ọchịchịrị, na ụgbọ mmiri kpuru.
Ọ bụrụ na ị nọ na-eche, ị nwere ike ịmasị n'ụgbọ mmiri ahụ nke eji ihe eji egwu mmiri. Ọzọkwa, ihe ịtụnanya Atlantic mmiri n'okpuru osimiri ụwa nke mmiri e kere eke dị ka sunfish, kọral, ga-echere gi karia nkpuchi. Oge ochie Fort San Juan Bautista nke na-ele ebe a mara mma ga-adị n'anya gị ka ị na-abịa, na-agbakwunye ihe omimi na ahụmịhe ahụ dum.
3. Ogige Ntụrụndụ Port Cros, France
Ruo omimi nke 8 m. na ụzọ pụrụ iche snorkel, ị nwere ike ịmasị ọtụtụ narị azụ na Port Cros National park. Nke a ochie marina ihe ndozi bụ otu n'ime ebe kachasị mma nsị na Europe. Plage de la Palud bụ ebe zuru oke iji bido ịmịgharị ihe nkiri gị.
N'ụzọ dị iche na ebe ndị ọzọ ịtụnanya nsị dị na ndepụta a, ebe a ị ga-ahụ 6 ihe omuma buoys nwere ihe omuma banyere ihe ndi ozo: Ebube peacock nke dị na East Atlantic, tee comber, obere ndị otu dusky, na ọtụtụ azụ ndị ọzọ mara mma.
One of ebe mmiri kacha mma n'ụwa, O doro anya na La Silfra bụ ebe epic snorkeling na Europe. Igwu mmiri n’etiti 2 Kọntinent Europe, ya na ezinụlọ ya, ma ọ bụ ndị enyi, na mmiri na-agbaze site na Langjokull glacier, bụ ihe a na-agaghị echefu echefu.
Silfra bụ otu n'ime ebe kachasị mma maka snorkeling n'ụwa, n'ihi ọhụụ dị ịtụnanya na 100 m. Agba ndị dị n'okpuru mmiri, igwu mmiri n'etiti uzo di egwu na coves, na ebube a niile bụ naanị otu elekere site na Reykjavik. Ebe ọ bụ na mmiri na-ajụ ezigbo oyi, ị kwesịrị ị na ịgba akwụkwọ a snorkeling njegharị, jiri akwa mmiri kwesịrị ekwesị na akụrụngwa iji mee ka ị na-ekpo ọkụ.
5. Agwaetiti Red, Sardinia, Italy
Clear mmiri dị ọcha dị mkpa maka ahụmahụ snorkeling dị ịtụnanya. Isola Rossa na Sardinia enwetawo ọnọdụ kachasị mma maka ịmị ụtọ nsị: mmiri doro anya, okwute ohia na ọgba, ndụ marina nke ga-afụ ụfụ gị, na aja aja aja nwere aja iku ume gi, n'etiti oge snorkeling.
Ga-ahụ obodo nta ndị ọkụ azụ azụ, Isola Rossa na North-West Sardinia. Coral, azụ, na nkume uhie bụ ọnọdụ zuru oke maka ezumike ezumike. Na mgbakwunye na sunbathing, ị nwere ike ịnụ ụtọ egwuregwu mmiri, ndakpu ala mmiri, na ikuku na-efesi ike n'ụsọ oké osimiri Italiantali. Ya mere, Jide n'aka na ị na-etinye akpa mmiri na-adịghị mmiri, na igwefoto dị n'okpuru mmiri iji cheta ụwa mmiri dị na Sardinia.
Milan ka Rome Na A Train
Pisa ka Rome Na A Train
19 obere agwaetiti mejupụtara agwaetiti Cabrera, ulo obibi na ihe ndi ozo di egwu, ụmụ mmadụ emetụbeghị. Blue ọgba, nchekwa mmiri bụ otu n’ime ọgaranya na Europe, na njem njegharị ị na-agụ, ị ga-achọpụta karịa 500 umu. Ejula, octopus, akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ, bụ ụfọdụ n'ime ihe ndị dị n'oké osimiri ị ga-ahụ.
Ọzọkwa, ị nwere ike ịnweta ohere ịtụnanya iji hụ ụgbọ mmiri dolphin ụfọdụ, n'ụzọ ị na-aga Cabrera. The Spanish n'ụsọ oké osimiri bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu n'oge okpomọkụ aga na Europe, na Mallorca bụ dreamy osimiri ebe a na-atụ anya na-eme njem maka ndị njem si n'akụkụ ụwa niile. Ya mere, tinye akwa gị na akwa mmiri gị, maka njem a na-agaghị echefu echefu ma zuru ike na Cabrera.
7. Ọdọ mmiri Walchensee
Nnukwu, acha anụnụ anụnụ, na miri emi, Lake Walchensee bụ ọmarịcha Ọdọ Mmiri Alpine na Germany. 75 KM si Munich, Ebe a na-aga snọklị dị na n'etiti etiti mpaghara Bavaria. Ya mere, dika i rigoro ikuku ma zuo ike, na echiche mara mma gbara gị gburugburu nye ọnọdụ dị jụụ kachasị maka ahụmịhe nsọ.
Na nnukwu visibiliti na 5m ruo 20m, Lake Walchensee bụ otu n'ime 10 kasị mma snorkeling ebe na Europe. Ọzọkwa, ị nwere ike inyocha miri na karịa egwurugwu trouts na efu, n'ime ọdọ mmiri doro anya, ka ị na-abanye mmiri na Lake Walchensee.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị mmadụ na-agwa gị ịmịpụ mmiri n'akụkụ Osimiri Mediterenian bụ ahụmịhe ịtụnanya, osimiri snorkeling bụ ihe pụrụ iche. Mee ka mmiri turquoise dị jụụ, n’elu Austria, Viecht am Traunfall bụ ebe kachasị mma maka snorkl na Austria. Osimiri Viecht am Traunfall bụ ebe obibi nke coral mara mma, na njem gị gaa na mma ndị a, a ga-akpọ gị ka ịwụ elu na ịwa mmiri.
Ya mere, Ikwo ụra na Alps nke Austrian bụ otu n'ime ahụmịhe kachasị mma na Europe. Ozugbo i mechara njem snọklị gị, ugwu nta na echiche osimiri bụ zuru ezu picnic na ebe izu ike. Ebe a, ị nwere ike inyocha ịtụnanya gbaa mmiri n'okpuru osimiri ị nwetara, ma nwee obi uto ikuku ohuru di na Austrian Landscape.
9. Agwaetiti Medes Spain
Agwaetiti Medes bụ akụkụ nke ọmarịcha okike reserve del Montgri. Emi odude ke akpatre Spanish n'oge okpomọkụ njedebe, Costa Brava, ndị Midia bụ ebe obibi nke ndụ mmiri pụrụ iche. Ọ bụrụ na ị na-akpaliwo mmasị site na mmiri ndụ, mgbe ahụ snorkeling ebe a, agaghị echefu echefu.
Ndagwurugwu asaa nke Midia, na ụsọ oké osimiri Catalonia, gbara gburugburu Oké Osimiri Mediterenian dị jụụ bụ paradaịs snorkeling. N'ezie, snorkeling na Medes bụ otu n'ime ihe kachasị elu ị ga-eme mgbe ezumike na Costa Brava. Na ụmụaka, enyi, ma ọ bụ naanị, ndị Midia bụ ebe obibi nke ụmụ anụmanụ mara mma, okpukpu mmiri, kpakpando mmiri, na barracudas.
10. Best Places N'ihi Snorkeling Na Europe: Elba Italy
Red gorgonians n'otu akụkụ, coral na-acha uhie uhie na oji na n'akụkụ nke ọzọ nke ụsọ oké osimiri, Elba bụ paradaịs. Osimiri Sant Andrea n'àgwàetiti Elba bụ ebe njem ọ bụla dị n'okpuru mmiri na-amalite. N’ebe dị anya n’ọdụ ụgbọ mmiri na mkpagharị, ndụ mmiri mmiri na agwaetiti a nke Tuscan dị ịtụnanya.
Na mgbakwunye na coral mara mma, azụ, na umu anumanu, n'ụsọ oké osimiri istali bụ otu n'ime ihe kacha mma n'ụwa. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ijide ume gị n'etiti ọgba na-enyocha ma na-achọ anwụfish, mgbe ahụ n'ụsọ osimiri nke Elba bụ ebe izu ike zuru oke.
ebe a na Save A Train, anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka ịhazi njem a na-agaghị echefu echefu gaa na ụwa ndị kachasị ịtụnanya n'ime ụwa ndị a 10 kacha mma ebe snorkeling na Europe ụgbọ okporo ígwè.
You chọrọ Embed anyị blog post “1o Best Places For Snorkeling In Europe” jidesie gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fig%2Fbest-places-snorkeling-europe%2F- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Njem ụgbọ oloko, Train Travel Austria, Train Travel Britain, Zụọnụ Travel China, Train Travel Czech Republic, Train Travel France, Inzọ Njem Italytali
Mere I Kwesịrị Zụlite Travel Na Winter Iji Paris